Noferana ho 75 000Ar ny vidy ambany indrindra ivarotan’ny mpamboly ny iray kilao amin’ny lavanila maitso.
Tsy maintsy jerena ny tombontsoan’ny tantsaha, tanterahina izany amin’ny alalan’ny fametrahana ny tsenan’ny lavanila maitso. Voavaly ny hetahetan’ireo mpamboly lavanila nihaona tamin’ny minisitra Edgard Razafindravahy.
Mpikambana dimy ao amin’ny Governemanta no nifanatrika tamin’ireo matihanina amin’ny sehatra lavanila any amin’ny Faritra SAVA androany Zoma 6 Mey 2022 tany Sambava, dia ny Minisitry ny Fampiroboroboana ny Indostria, ny Varotra sy Fanjifana, ny Minisitry ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana, ny Minisitry ny Fitsarana, Ny Minisitry ny Fambolena sy Fiompiana ary ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena (SEG).
Natao loa-bary an-dasy ny momba ny fisokafan’ny tsenan-davanila maitso ao amin’ny faritra SAVA, ny vidin’ny lavanila maitso, ary ny fiarovana ny raharahan-davanila hizotra am-pahamarinana.
« Tsy tokony hisy ny mpandraharaha hivarotra ny kilaon’ny lavanila latsaky ny 250 dolara eo amin’ny tsena iraisam-pirenena”, hoy ny Minisitry misahana ny Varotra Edgard Razafindravahy nanoloana ireo mpandraharaha mpanondrana, mpividy sy mpikarakara, mpanangom-bokatra ary mpamboly lavanila.
Miankina amin’izany rehetra izany no ahafahana manaja ny vidin’ny lavanila 75 000 Ar farany ambany.
Napetraka koa moa ny fepetra samihafa toy ny tsy maintsy ananan’ny mpanangom-bokatra sy ny mpikarakara mpividy lavanila karatra maha-matihanina azy ahafahana mahita mazava tsara ny lalan’ny lavanila.
Hamafisina ny sazy amin’ny halatra lavanila, hapetraka ny borigady manokana.
Misy ny fakan-kevitra ifotony amin’ireo mpamboly, ary hanao ny andraikitra tandrify azy ny Filankevi-pirenena momba ny lavanila (CNV).
Hatao ny “digitalisation” n’ny karatra maha-mpamboly.
Niray feo ireto mpikambana ao amin’ny Governemanta ireto raha nilaza fa “tsy natao ho fampahatahorana ny fanjakana fa natao ho mpanelanelana sy hijery ny mahasoa ny vahoaka”.
Relations commerciales Madagascar-Maurice : Un potentiel à exploiter »